China Boiler ingxubevange umbhobho ingxubevange intsimbi seamless umbhobho imfuyo mveliso kunye nabathengisi | Hongyi
Uxinzelelo oluphezulu lombhobho we-alloy pipe: 15 crmog, 12 cr2mog, 12 cr1movg, 12 cr2mowvtib, 10 cr9mo1vnb, SA210A1, SA210C, SA213 T11, SA213 T12, SA213 T22, SA213 T23, SA213 T91, SA213 T92, ST45.8 / Ⅲ 13 crmo44, 10, 15 mo3, crmo910.
PIgama eliyimveliso Izinto eziphathekayo Umgangatho Ukucaciswa Ukusetyenziswa
Ingxubevange steel pipe Iifayile: 12Cr1MoVG
JISG3458-88 -128-1240 * 1-200 ubushushu obuphezulu, ubushushu obuphantsi kunye nokumelana nomzi mveliso we-petrochemical boiler
Umbhobho wobushushu obuphantsi I-16MnDG, I-10MnDG, I-09DG
I-ASTM A333 -128-1240 * 1-200 45 ~ -195 umbhobho ophantsi woxinzelelo lombhobho wenqanawa kunye nombhobho wobushushu obushushu obuphantsi
Uxinzelelo oluphezulu lwe-boiler 20G
DIN17175-79 -128-1240 * 1-200 ipayipi yokufudumeza, ukuqokelela ibhokisi kunye nomphunga wombhobho webhoyila yoxinzelelo oluphezulu
Uxinzelelo oluphezulu kumbhobho wesichumiso
16Mn I-GB6479-2000 -128-1240 * 1-200 izixhobo zemichiza kunye nemibhobho enobushushu obusebenzayo be -40-400 kunye noxinzelelo lokusebenza kwe-10-32mpa
Umbhobho woxinzelelo oluphakathi
16Mn<Q345A.B.C.D.E> I-GB3087-2008 -128-1240 * 1-200 Ukwenza ibhoyila yoxinzelelo oluphakathi noluphakathi kunye nebhoyila kaloliwe
Umbhobho wokuhambisa 10 #, 20 #
I-ASTM A106A, B, C, A53A, B
I-ASTM A53 -128-1240 * 1-200 Ityhubhu yesinyithi ngokubanzi engenamthungo efanelekileyo yokuhambisa ulwelo
Isakhiwo ngokubanzi ityhubhu 10 #, Amashumi amabini #, 45 #, 27SiMn
I-ASTM A53 -128-1240 * 1-200 Kusebenza kulwakhiwo ngokubanzi, inkxaso yobunjineli machining, njl
Ingxubevange umbhobho uhlobo umbhobho intsimbi ingenamthungo. Umbhobho weAlloy ungahlulwa ube ngumbhobho ongenamthungo wokusetyenziswa kwesakhiwo kunye noxinzelelo oluphezulu lombhobho weAlloy. Ukwahluka kwimigangatho yemveliso kunye nomzi mveliso weetyhubhu zealloy, iipropathi zoomatshini zemibhobho zitshintshiwe ngokuqiniswa kunye nobushushu. Ukufezekisa iimeko zokulungisa ezifunekayo. Ukusebenza kwayo kuphezulu kunaleyo ityhubhu yentsimbi engenamthungo ngokubanzi, ukwenziwa kweekhemikhali kwityhubhu yengxubevange iqulethe ngakumbi iCr, ukumelana neqondo lobushushu eliphezulu, ukumelana neqondo lobushushu eliphantsi, umhlwa ukunganyangeki Akukho kubumba kwe-alloy okanye ukwakheka okumbalwa kwealloy kwityhubhu yekhabhoni engenamthungo ngokubanzi. Isizathu sokuba ityhubhu ye-alloy isetyenziswe ngokubanzi kwi-petroleum, i-aerospace, imboni yamakhemikhali, amandla kagesi, i-boiler, imboni yezempi kunye namanye amashishini kukuba iipropati zoomatshini zetyhubhu ye-alloy ziguquka kakuhle kwaye zilungelelanise kakuhle.
I-alloy pipe isetyenziselwa ukufudumeza umbhobho wombane ophantsi kunye noxinzelelo ophakathi (uxinzelelo olusebenzayo alukho ngaphezulu kwe-5.88mpa, iqondo lobushushu elingaphantsi kwama-450 ℃); Isetyenziselwa ukufudumeza imibhobho yomphezulu, uqoqosho, ii-superheater, ii-reheater kunye nemibhobho ye-petrochemical industry ye-boilers ephezulu (uxinzelelo olusebenzayo ngokubanzi lungaphezulu kwe-9.8mpa kunye nobushushu obuphakathi kwe-450 ℃ ~ 650 ℃).
Ingxubevange yentsimbi ityhubhu isetyenziswa ikakhulu kwisityalo, isityalo samandla enyukliya, uxinzelelo oluphezulu kwibhoyila, ubushushu obuphezulu, ukuphinda ubambe umzimba kunye nolunye uxinzelelo oluphezulu kunye nemibhobho yokushisa ephezulu kunye nezixhobo, yenziwe ngentsimbi ekumgangatho ophezulu yentsimbi, intsimbi yesinyithi kunye nobushushu obungenasici- intsimbi enganyangekiyo, emva kokuqengqeleka okushushu (i-extrusion, ukwanda) okanye ukuziqengqa okubandayo (ukuzoba).
Inokuba yi-100% iphinde iphinde isetyenziswe kwakhona, ngokuhambelana nesicwangciso-nkqubo sesizwe sokhuselo lokusingqongileyo, ulondolozo lwamandla kunye nolondolozo lwezixhobo. Umgaqo-nkqubo wesizwe ukhuthaza ukwandiswa kwecandelo lesicelo sepayipi yoxinzelelo oluphezulu e-China, inani lokusetyenziswa kombhobho we-alloy kwivolumu yensimbi iyonke sisiqingatha nje saloo mazwe aphuhlileyo. Ukwandiswa kwenkundla yesicelo sombhobho we-alloy kunika indawo ebanzi yokuphuhliswa kweshishini.Ngokutsho kuphando lweqela leengcali zesebe lombhobho we-China Special Steel Association, imfuno yombhobho ophezulu we-alloy e-China iya kunyuka ngo-10- I-12% ngonyaka kwixa elizayo.
Egqithileyo Ukuchaneka okuphezulu okubandayo okutsaliweyo kumbhobho wentsimbi ngokuchanekileyo
Okulandelayo: Izinto ezishushu ezishushu zentsimbi ezakhiwe zakha uluhlu lweplate emnyama